တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များ ကတိကဝတ်ပါ သတ်မှတ်နယ်မြေအတွင်းသို့ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၂ ရက်နော - Yangon Media Group
တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များ ကတိကဝတ်ပါ သတ်မှတ်နယ်မြေအတွင်းသို့ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၂ ရက်နော
နယ်မြေကျော်လွန် လှုပ်ရှားလျက် နယ်မြေလုတိုက်ပွဲများဖြစ်နေကြသည့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးသည် ကတိကဝတ်ပါ သတ်မှတ်နယ်မြေအတွင်းသို့ ၂ဝ၁၉ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၂ ရက် နောက်ဆုံးထား၍ ဆုတ်ခွာကြရန် တပ်မတော်က သတိပေးလိုက်ကြောင်း သိရသည်။ ဇန်နဝါရီ ၂၅ ရက်တွင် တပ်မ တော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့က အထက်ပါအတိုင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ဒေသခံပြည်သူလူထု၏ အကျိုးစီးပွားနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်အား ထိခိုက်စေသည့်လုပ်ရပ်များမလုပ်ကြရန်နှင့် နယ်မြေ ကျော်လွန်လှုပ်ရှားလျက် နယ်မြေလုတိုက်ပွဲများဖြစ်နေကြသည့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးသည် ကတိကဝတ်ပါ သတ်မှတ်နယ်မြေအတွင်းသို့ ၂ဝ၁၉ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၂ ရက် နောက်ဆုံးထား၍ ဆုတ်ခွာကြရန် သတိပေးကြောင်းနှင့် တပ်မတော်၏ ”ပစ်ခတ်တိုက် ခိုက်မှုရပ်စဲရေးနှင့် ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ထုတ်ပြန်ချက်”ပါအတိုင်း အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဗဟိုဌာနနှင့်သော်လည်းကောင်း၊ တပ်မတော်၏ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေး ရေးအဖွဲ့နှင့်သော်လည်းကောင်း၊ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ညှိနှိုင်းဆွေး နွေးခြင်းများကိုအမြန်ဆုံးပြုလုပ် သွားရန်တိုက်တွန်းကြောင်း ယင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင်ပါရှိသည်။
တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် အမှန်တကယ်ဆန္ဒရှိပါလျှင် ကတိကဝတ်များအပေါ် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်မည်ဖြစ်သော်လည်း ၂ဝ၁၂ ခုနှစ် မေ ၁၉ ရက်တွင် ကျိုင်းတုံမြို့၌ ပြည်ထောင်စုအဆင့် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည့် RCSS/ SSA အနေဖြင့် မြေပုံညွှန်းအတိအကျဖြင့် သတ်မှတ်ထားသည့် စာချုပ်ပါနယ်မြေအတွင်းမှလည်း ကောင်း၊ SSPP(ဝမ်ဟိုင်း)အဖွဲ့ အနေဖြင့် ၂ဝ၁၅ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၁၅ ရက် နေပြည်တော်၊ ရတနာသိင်္ဃဟိုတယ်၌ပြုလုပ်ခဲ့သည့် အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း အပိုဒ်(၂)ပါ တပ်မတော်၏လျာထားမြေ ပုံပါအတိုင်းလိုက်နာရန်လည်း ကောင်း၊ TNLA/AA နှင့် MNDAA တို့အနေဖြင့်လည်း ၂ဝ၁၈ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၂ ရက်နေ့ရက်စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်ထားသည့် လက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ သဘောထားထုတ် ပြန်ချက်အပေါ်၌လည်းကောင်း၊ KNU နှင့် KNLA(PC) အဖွဲ့တို့ အနေဖြင့် NCA စာချုပ်ပါအချက်များအားလည်းကောင်း တိကျစွာလိုက်နာကြရန် လိုအပ်မည်ဖြစ် ကြောင်း၊ ထိုသို့ကတိကဝတ်အတိုင်းလိုက်နာမှသာလျှင် ထာဝရ ငြိမ်းချမ်းရေးအပေါ် ဆိုးကျိုးသက် ရောက်မှုလျော့နည်းစေပြီး အပြန်အလှန်ယုံကြည်မှုကိုလည်း တိုးတက် ဖြစ်ပေါ်စေမည်ဖြစ်ကြောင်း တပ်မတော်သတင်းမှန် ပြန်ကြား ရေးအဖွဲ့က ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
တပ်မတော်အနေနှင့် ပစ် ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေးနှင့် ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ဆွေး နွေးညှိနှိုင်းရန် တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နယ်မြေငါးခု၌ ၂ဝ၁၈ ခုနှစ် ဒီဇင် ဘာ ၂၁ ရက်မှ ၂ဝ၁၉ ခုနှစ် ဧပြီ ၃ဝ ရက်အထိ စစ်ရေးဆိုင်ရာလှုပ် ရှားမှုအားလုံး ရပ်ဆိုင်းပေးခဲ့ ကြောင်း၊ စစ်ရေးဆိုင်ရာလှုပ် ရှားမှုများရပ်ဆိုင်းထားသည့် ကာလအတွင်း စစ်ဆင်ရေးနယ်မြေအလိုက် တိုင်းရင်းသားလက်နက် ကိုင်အဖွဲ့များအနေဖြင့် အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဗဟိုဌာနနှင့် ဆွေးနွေးသွားရန်ဖြစ်ပြီး လိုအပ်လာပါက တပ်မတော်မှဖွဲ့စည်းပေးထားသည့် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးရေးအဖွဲ့တို့ဖြင့် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးရန် လမ်းဖွင့်ပေးခဲ့ကြောင်း ယင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင်ပါရှိသည်။
တပ်မတော်မှ ပစ်ခတ်တိုက် ခိုက်မှုရပ်စဲထားသည့် တစ်လ ကျော်ကာလအတွင်း တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်း များအနေဖြင့် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအား သဘောထားမှန်ကန်စွာဖြင့် အဆင့်လိုက်အမြန် ဆုံးဆွေးနွေးဆောင်ရွက်မှုပြုလုပ်သင့်သော်လည်း အင်အားတည် ဆောက်ခြင်း၊ နယ်မြေတည် ဆောက်ခြင်းတို့ကို ဦးတည်သည့် လုပ်ဆောင်မှုများကြောင့် ဒေသခံ ပြည်သူလူထု၏ အသက်၊ အိုးအိမ်၊ စည်းစိမ်၊ အကျိုးစီးပွားများကို ထိခိုက်ခဲ့ရပြီး စစ်ဘေးရှောင်ဒုက္ခသည်များ များပြားလာခြင်း၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှု လုံခြုံချောမွေ့ ရေးကို ထိခိုက်လာခြင်း၊ ပြည်သူများလိုလားတောင့်တလျက်ရှိ သည့် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကို ထိခိုက်စေခြင်းများဖြစ် ပေါ်လျက်ရှိသည်ကို တွေ့ရှိရကြောင်း ယင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင်ပါရှိသည်။
တပ်မတော်မှ အပစ်အခတ်ရပ်စဲထားသည့် ၂ဝ၁၈ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၂၁ ရက်မှ ၂ဝ၁၉ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီ ၂၄ ရက်အထိ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များအနေဖြင့် အချင်းချင်းတိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားမှု ၁၃ ကြိမ်၊ နယ်မြေကျော်လွန်လှုပ်ရှား မှု ၁၆၈ ကြိမ်၊ ဆက်ကြေးကောက်ခံ မှု ၁ဝ ကြိမ်၊ လူသစ်စုဆောင်းမှု အကြိမ် ၂ဝ၊ တပ်မတော်အား ချောင်း မြောင်းပစ်ခတ်မှု ၁ဝ ကြိမ်နှင့် ကားမိုင်းဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားမှု နှစ်ကြိမ်ဖြစ် ပေါ်ခဲ့ပြီး ”ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေးနှင့် ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးအ တွက်ထုတ်ပြန်ချက်”ပါ အပိုဒ်(၅)၊ (၆)နှင့် (၇)တို့အား အကြိမ်ကြိမ် ဖောက်ဖျက်လျက်ရှိကြောင်း တွေ့ ရှိရသည်ဟု တပ်မတော်က ထုတ် ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် လှိုင်သာယာရှိ အခြေခံပညာ ကျောင်းသုံးကျောင်းသို့ သွားရောက်?
ရုရှားသမ္မတ ပူတင်က ဗင်နီဇွဲလားအစိုးရကို ထောက်ခံဟုဆို၊ အမေရိကန်က ဗင်နီဇွဲလား ပြည်တွင်ရေးကို
မြန်မာနှစ်ကူး မဟာသင်္ကြန်အထိမ်းအမှတ် MPT က ငွေကျပ်သိန်းပေါင်း ၁ဝဝဝ ကို လူမှုအကျိုးပြုအဖွဲ့အစည်?
ရာသီဥတု ပူပြင်းခြောက်သွေ့နေ၍ အမေရိကန် နယူးမက္ကဆီကို ရှိ အမျိုးသားဥယျာဉ်ကို မီးအန္တရာယ် စိုး
ငလျင်နှင့် ဆူနာမီဘေးဒဏ်ထိ ဆူလာဝေဆီဒေသ လောင်စာဆီ ပြတ်လပ်မှုနှင့် ရင်ဆိုင်နေရ